Yekudzidza gemology - Gemology kosi - Nyowani inowanikwa yekuvandudza 2021
NEW : Kudzidza gemology pamhepo
Nekuda kwechikumbiro chakakura kubva kuvadzidzi vedu vasingakwanise kufamba kubva munaKurume 2020, izvozvi zvave kugona kudzidza online.
Isu tinoshandisa akasiyana software yekudzidzisa ine yakawanda kamera system: Zoom, Skype, WeChat, WhatsApp… Tinogona kushandisa chero imwe software zvinoenderana nezvaunoda.
Chii chinonzi gemology?
Isu tinodzidzisa gemology muChirungu kana chiFrench mutauro
Half day (3 maawa)
Zuva rakakwana (2 x 3h = maawa 6)
Synthetic & kurapwa
Mitengo & Grading
Gemology ndiyo sainzi yezvigadzirwa zvemhando yepamusoro, uye nhungirwa yakasarudzika yebazi rekare resainzi mineralogy. Study gemology inovhara ese ehunyanzvi zvinhu zvematombo anokosha uye gem zvinhu.
Makemikari avo, epanyama uye ehupfumi maficha, iwo matekinoroji anoshandiswa kugadzirwa kwekunyepedzera kwekuteedzera uye synthetics, kucheka nekukorobha matombo anokosha, uye zvinonyanya kukosha nzira dzejemology nzira uye zviridzwa zvinoshandiswa mukucherechedza, kuisa uye kuongorora matombo anokosha.
Izwi rekuti 'gem zvinhu' rinofukidza huwandu hwakawanda kwazvo hwezviitiko. Midziyo yakawanda yematombo ndeyemaminera, asi yeiyo 3000 kana zvakadaro, zvicherwa zvinozivikanwa nemunhu, ingangoita mhuri makumi manomwe / mazana mashanu ematombo anofungidzirwa kuve nehunhu hunopihwa kuchikamu chakakosha chinonzi matombo anokosha.
Sumo kumatombo makuru anokosha anowanzo kuwanikwa mumusika. Uku kutanga, kufambira mberi kana nyanzvi yemakosi kosi inosimbisa zvakakosha zvinhu zvematombo akadaro.
1 munhu: 200 $
2 kune 4 munhu: 120 $ / munhu wese
5 munhu +: 100 $ / munhu mumwe nomumwe
1 munhu: 400 $
2 kune 4 munhu: 240 $ / munhu wese
5 munhu +: 200 $ / munhu mumwe nomumwe
* Mitengo inoenderana chete nehuwandu hwemunhu kubva kune yako yekubhuka * Kuhodha angangoita 2 vhiki pamberi Ndapota taura nesu zvekuverenga.
Sei usingawire mumusungo wevatengesi venhema mabwe anotengesa? Nzira yekuziva sei yematombo emabwe, synthetics, kurapwa? Maitiro ekuyera mhando nemitengo? Iwe uchawana mhinduro kumibvunzo yako yose mukati mekirasi ino
Chirongwa chekirasi chinosanganisira:
Girazi kuzadza / Fracture kuzadza / Flux Kuporesa
Rega ikirasi ive nenzwisiso yepamusoro yekuti mabwe anowanikwa kubva kupi uye kuti vangabudirira sei kuona iwo akasiyana siyana maficha.
PUROFESA Dr. MOHAMED MOHAMED TOLBA SAID apedza kosi yekudzidzira mune gemology. 1 zuva (maawa matanhatu) “Musi wa15 Kubvumbi 2015 ndakange ndaswera zuva rinonakidza uye rinonakidza rekudzidza gemological intensive kosi kuGemological Institute yeCambodia, VaJean-Philippe vaive mudzidzisi wangu mumaawa matanhatu ekudzidza, Iye inyanzvi mune gemology. "Ndinofunga Gemological Institute yeCambodia ndiyo nzvimbo chaiyo yekuwana ruzivo rwakawanda nezve gemology nematombo anokosha."
Mr. SERGIO (anobva kuItari) uye Mai WIRIYA (vanobva kuThailand) vapedza kosi yekudzidzira mune gemology. Hafu yezuva (maawa matatu) “Philippe il proprietario è una persona molto competente e professionale nel campo della gemmologia, noi abbiamo fatto un corso di mezza giornata in cui ci ha introdotto nel mondo delle gemme.ha una showroom notevole di gemme autentiche cambogiane e non… insomma se volete comprare rubini compini e zaffiri veri birmani recatevi da Philippe è il n ° 1 a Siem kukohwa. Inoltre se volte ”- Chivabvu 5, 2015
Mr. CARL (anobva kuEngland) naAmai AGYNESS (vanobva kuChina) vapedza kosi yekudzidzira mune gemology. 1 zuva (maawa matanhatu) Chikunguru 30, 2015
Mr. Toh Hock An (anobva kuTaiwan) apedza kosi yekudzidzira mune gemology. Hafu yezuva (maawa matatu) Nyamavhuvhu 15, 2015
Master Hanz của (kubva kuPhilippines) apedza kosi yekudzidzira mune gemology. Hafu yezuva (maawa matatu) Gumiguru 15, 2015
Mme Ramya Ponnada naVaKrishna Kanth Ponnada (vanobva kuIndia) vapedza kosi yekudzidzira mune gemology. Hafu yezuva (maawa matatu) Mbudzi 12, 2015
Mr. Sonny Rodriguez & Ms. Tiffany Rodriguez (vanobva kuPhilippines) vapedza kosi yekudzidzira mune gemology. Hafu yezuva (maawa matatu)"Kana zvichidikanwa mabwe anokosha, enda pano" - ndanga ndichitsvaga mhinduro maererano nematombo anokosha akatengeswa mumusika wekare uye nzvimbo ino yakandipa ruzivo rwese rwandaida kuti ndizive kunyanya kwechokwadi chematombo. Zviripachena zvitoro zvakawanda zvemusika mumusika zvinokutengesera zvemanyepo.
Ini ndakanyoresa kumusangano we3hour uye zvirokwazvo inowedzera ruzivo rwangu nezvematombo anokosha. Vakandipa chitupa mumashure uye chaive chakakodzera 3hours. Mr. Jean anonyanya kufarira matombo anokosha. Tarisa webhusaiti yavo, bata kwavari uye ivo vanozotora tuk-tuk kukutora iwe kuhotera yako. Chero zvazvingaitika hausi kufarira kudzidza matombo ingoshanya uye uone matombo anowanikwa zviri nyore kutengeswa - Mbudzi 12, 2015
Mr. Thorstein naVa Widar (vanobva kuNorway) vapedza kosi yekudzidzira mune gemology. Hafu yezuva (maawa matatu) Mbudzi 16, 2015
Tom naKristin (vanobva kuUSA) & Norma naTrevor (vanobva kuCanada) vapedza kosi yekudzidzira mune gemology. November 22, 2015
Konstantin naSilviya (vokuBulgaria). November 28, 2015
Miles, Chikunguru, Rosie, Tilly & Celeste (anobva kuEngland). December 22, 2015
Ms. Lee Hui Yun (anobva kuSingapore). December 23, 2015
Annick & Maxim (vanobva kuAustralia). December 28, 2015
Jasmine, Bruce & Allan (vanobva kuPhilippines). December 29, 2015
Marc & Lani, Kubva kuLos Angeles, California, USA January 10, 2016
Ms. Ruth, kubva Indonesia January 12, 2016
Mr. Jeff, kubva USA January 13, 2016
Joshua & Michael, vanobva kuU.SA. January 20, 2016
Stephanie & Mason, vanobva Hong Kong January 21, 2016
Gary, Diane & Barb, vanobva kuUSA January 21, 2016
Anna & Diana, vanobva kuRussia February 4, 2016
Sok heng, Pui San, Chiew Sum & Sing Kwan, anobva kuMalaysia "Kushanya kunotyisa - kunonakidza uye kuvhura kwemaziso" - Nzvimbo huru yekushanyira! Isu takatora chidzidzo cheawa rimwe, icho chakazopedzisira chave chakareba kwenguva yakati rebei nekuda kwehuwandu hweruzivo rwakanga rwuri kugoverwa naJean. Jean aive mukuru pakusangotsanangudza mhando dzakasiyana dzematombo, asi aive zvakare mukuru pakuzviunza kuhupenyu mumamiriro ekuCambodian pamwe nenyaya dzakanyanyisa. Zvakare kuratidzira kukuru kwazvo murabhoritari kwaunosvika kuti uone mhando dzakasiyana dzematombo uye edza kuona kuti ndepapi chaipo, kurapwa kana chakagadzirwa! Iko kune zvakare kukuru kusarudzwa kwenzvimbo dzekuCambodhiya Matombo ekutenga pamitengo inonzwisisika mushure mechidzidzo. Vakadzidza zvakawanda, vakave nekunakidzwa kwakawanda uye vakasara necambodian gem yakanaka uye nyowani yakawanikwa kukoshesa gemology! - Kukadzi 5, 2016
Nikolas, Christodoulos & Despoina, vanobva kuGreece February 7, 2016
Ms. Katherine, wokuSpain, apedza kurovedza kosi ari gemology. February 10, 2016
Naho, anobva kuJapan & William, anobva kuUK, apedza kosi yekudzidzira mune gemology. February 15, 2016
Firipi, kubva kuEngland, apedza kurovedza kosi ari gemology. February 19, 2016
Knud-Erik, Dorte & Dorthe, anobva kuDenmark, apedza kosi yekudzidzira mune gemology. February 20, 2016
Ms. Jerica, kubva USA, apedza kurovedza kosi ari gemology. March 4, 2016
Ms. Lena, kubva Ukraine, apedza kurovedza kosi ari gemology. Ini ndashanyira Institute kuti ndizive zvakawanda pamusoro pematombo eCambodian. Ini ndinofanira kutaura kuti ino nzvimbo yakanyatso kuitirwa vese - vashanyi, vatungamiriri, nyanzvi, vatengi. Pano iwe unogona kuona uye 'kuona' matombo epasi rese. Ruzivo rwacho rwakajeka, mhepo inoshamisa. Ndinoda kutenda Philippe nechidzidzo chakanaka - Kurume 14, 2016
Javier & Andrea, vanobva kuEngland, vapedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. March 24, 2016
Tanya, Sebastian & Scott, vapedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. Takatora mwanakomana wedu ane makore masere ekuberekwa kweimwe kosi yeawa sezvo anga achifarira matombo, matombo nemakristasi. Jeanne-Pierre akashandisa zvakanyanya kudarika iyo yakapihwa awa uye aive neruzivo rwakanyanya uye anofarira pachidzidzo che gemmology. Mwanakomana wedu akanyatsonakidzwa nedzidzo, sezvatakaita isu, kunyanya chikamu chemu laboratori, tichitsvaga matombo akasiyana pasi pesikorosikopu. Akafara kuenda nechitupa uye zvakare Praseolite ibwe. Ndatenda. - Kurume 29, 2016
Sangita & Daniel, vanobva kuEngland, vapedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology April 3, 2016
Hilary & Ian, vanobva kuAustralia, vapedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. April 4, 2016
Maria & Joanna, vanobva kuPhilippines, vapedza iyo gemology kosi mune gemology. Akatora hafu yezuva kosi kuGemological Institute. Yaive Inodzidzisa kwazvo! Mushure meiyi kosi, isu tiri chokwadi 100% kuwedzera kuvimba pamusoro pekuongorora matombo anokosha. - Kubvumbi 8, 2016
O'Malley Mhuri, kubva kuUSA, mushure mekudzidzira kosi yeGemology. April 14, 2016
Silvester & Silvia, kubva Australia, apedza kurovedza kosi ari gemology. Dai 12, 2016
Ms. Akemi, kubva Japan, apedza kurovedza kosi ari gemology. Dai 15, 2016
Julius, Marieflor, Sandrine, Coleen & Cedric, vanobva kuPhilippines, vapedza kosi yekudzidzira mune gemology. Dai 29, 2016
Ma. Luz, anobva kuPhilippines, & Gordon, vanobva kuUK, vapedza iyo gemology kosi mu gemology. Dai 31, 2016
Katie, Edwardo, Jennifer, & Jeffrey, vanobva kuUSA, vapedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. June 16, 2016
Jamie & Ellie, vanobva kuUSA, vapedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. July 18, 2016
Pauline & Ronan, anobva kuFrance, apedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. August 1, 2016
Sue, Maureen & Bruce, vanobva kuUSA, vapedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. August 11, 2016
Anne & Olivier, vanobva kuFrance, vapedza iyo gemology kosi mune gemology. August 18, 2016
Max & Hester, anobva kuUSA, apedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. August 19, 2016
Carrie & Martijn, anobva kuAustralia, apedza kosi yekudzidzira mune gemology. August 20, 2016
Katherine, kubva kuAustralia, apedza kurovedza kosi ari gemology. Svondo 8, 2016
Allesha & Ross, vanobva kuUSA, vapedza iyo gemology kosi mune gemology. Svondo 10, 2016
Mr.Thiery, wokuFrance, apedza kosi kurovedza vhiki rimwe (maawa 30) muna gemology. Svondo 26-30, 2016
Ali & Joe, apedza iyo yekudzidzira kosi mune gemology. October 20, 2016
Lenny, mudzidzi wedu gotwe, kubva kuFrance, apedza kurovedza kosi ari gemology. October 21, 2016
Steven & Jene, anobva kuU.SA, apedza iyo kosi yekudzidzira mune gemology. December 5, 2016
Fiona & Shah, vanobva kuEngland, vapedza iyo gemology kosi mune gemology. December 9, 2016
Aislinn & Dominique, anobva kuHong Kong.December 12, 2016
Ndapota taura nesu zvekuverenga.